नायिका श्वेता खड्काको बिवाह हुदैछ भनि हल्ला चलिएका युवक को हुन् ? – ramechhapkhabar.com
नायिका श्वेता खड्काको बिवाह हुदैछ भनि हल्ला चलिएका युवक को हुन् ?
यतीबेला अभिनेत्री स्वेता खड्काले बिहे गर्न लागेको खबर निकै चर्चामा छ । केही दिनयता स्वेताको बिहेबारे खबर चर्चामा आए ।
खासमा दशैंको टीका लगाएका बेला एक युवकसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि स्वेताको बिहेबारे खबर भाइरल हुन पुगेको हो ।
दशैंका बेला सार्वजनिक तस्वीर कसको हो ? प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त तस्वीर धनगढीका विजयेन्द्र रावतको हो । उनका बुबाको फेसबूक आईडी स्नेहाल्ता रावतको प्रोफाइलमा राखिएको तस्वीरमा देखिएकी महिला विजयेन्द्रकी आमा हुन् ।
उनको तस्वीर स्वेताले २३ अप्रिलमा आमाको मुख हेर्ने दिन आफ्नो फेसबूकमा शेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘ह्याप्पी मदर्स डे टु माइ डियर मदर्स’ ।
जन्म दिने आमा, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी आमा र विजयेन्द्रकी आमाको गरी तिन तस्वीर स्वेताले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेपछि स्वेता यी युवकसँग प्रेममा छिन् भन्ने संकेत गरेको धेरैको अनुमान गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार विजयेन्द्र भगत मेटल सञ्चालकका छोरा हुन् । विजयेन्द्रभन्दा स्वेता धेरै जेठी छिन् ।
यस बिषयमा अभिनेत्री स्वेताले भने अहिले फैलिएको हल्ला गलत भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । हल्ला अनुसार स्वेताको बिहे यही मंसिर ५ मा हुने भनिएको छ । तर, स्वेताले आफू बिजनेश, माझी बस्ती र केही चलचित्रको काममा व्यस्त रहेकाले अहिले बिहे गर्ने मूडमा नरहेको बताइन् ।
केही समयअघि श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी आमा अर्थात स्वेताकी सासूआमा र परिवारका अन्य सदस्यले बिहे गर्ने स्वीकृति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।